Voatavo sy burger epinara | Recipe ao an-dakozia
Burger spinach spinach
Toñy Torres | | Resety legioma, Resipeo maivana
Raha mbola mieritreritra ny sakafo hariva hariva ianao dia aza adino ity fomba fahandro mihinana voatavo sy episy ity. Izy io dia lovia tsotra, matsiro ary haingana hanomanana izay ho tian'ny fianakaviana iray manontolo, eny fa na dia ireo ankizy izay mametraka olana bebe kokoa aza rehefa mihinana legioma sasany. Ny endrika hamburger dia mety amin'ny fandrahoana sakafo isan-karazany, satria ny masirasira dia voadidy tsara ary afaka manampy akora maro.
Ho an'ny hamburger androany dia nampiasa voatavo aho, satria amin'ny vanim-potoana sy no fotoana mety indrindra hankafizana ireo tombo-tsoa rehetra momba ny sakafo an'ity legioma ity. Raha ny epinara dia tsy afaka tsy ho eo ambony latabatra izy ireo satria loharano vy sy kalsioma, ilaina amin'ny fahasalamana. Ireo hamburger ireo dia azo aroso amin'ny lovia, fa raha te-hikasika azy indray ianao dia afaka manamboatra hamburger nentim-paharazana miaraka amin'ny mofo voa, fromazy, voamadinika voatabia ary saosy voatabia. Mazotoa homana!
Lakozia: tsy mihinan-kena
Fotoana manontolo: 1 h 5 min
Voatavo vaovao 400 gr
250 gr tsimoka epinara
lafarinin-kesika na sombin-mofo
Voalohany, handeha hodiadia isika ary hosasana tsara ny voatavo, hasiana ampahany kely sy fitehirizana.
Sasao tsara ny ravina epinara ary miaro.
Ankehitriny, hametraka vilany lehibe amin'ny afo isika, miaraka amin'ny rano, sira ary menaka oliva mitete.
Rehefa mafana ny rano dia ampio ny sombin-voatavo ary andrahoy mandritra ny 15 minitra na mandra-pahafatin'ny legioma.
Miaraka amin'ny fanampian'ny sotro slotted, esory ny voatavo ao anaty rano ary arotsaho.
Ao amin'ilay rano nahandroantsika ny voatavo ihany, ampio ny epinara ary mahandro mandritra ny 5 minitra.
Arotsinay ary ampangatsiahina ny legioma.
Apetrakay ao anaty fitoeram-be ny voatavo ary miaraka amin'ny tsiranoka dia potehintsika tsara izy.
Miaraka amin'ny hety, notetehinay ny epinara ary afangaro amin'ny voatavo.
Manampia atody roa voatoto sy sira mba hanandrana.
Ary farany, izahay dia manampy lafarinina na sombin-mofo, mandra-pahatongan'ny koba tsy miovaova.
Hosarahintsika amin'ny fonosana plastika ny koba, mba hamafisiny alohan'ny handehanany amin'ny lapoaly.
Isika dia mametraka ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny 2 farafahakeliny handrahoana sakafo.
Azonao atao ny mangatsiaka ny koba hamburger tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resety legioma » Burger spinach spinach
Petaka atody na Baba Ganoush